Dom » Archive araka ny sokajy 'Xiaomi Home'
Vaovao, Smart Auto, Fandraisana Xiaomi
Xiaomi: fotoana ho an'ny fiara elektrika
fiara elektrika, xiaomi
Lei Jun, mpanorina, filoha ary tale jeneralin'ny Xiaomi, dia nanambara fa misy orinasa iray noforonina hamokarana fiara elektrika. Xiaomi dia hampiasa vola mitentina 10 miliara dolara aminy ao anatin'ny 10 taona ho avy. Lei Jun ...
Xiaomi dia manana fifaninanana matotra. Fantatray ny vidin'ny realme 8 Pro
Realme, realme 8 pro, xiaomi
Amin'ny 8 aprily, ny smartphone smartphone Realme 8 Pro efa nambara hatry ny ela dia hidona amin'ny tsena, hiady amin'ny fitarihana tsena miaraka amin'ny maodely Redmi Note 10 Pro. Efa nianarantsika ny vidin'ny smartphone Poloney, izay mahagaga ...